Inona avy ireo fanontaniana tena manontany tena amin'ny fitadiavana milina?
Fanontaniana na fangataham-pikarohana amin'ny fikarohana dia ny teny na andian-teny ampiasain'ireo mpampiasa voakasik'ity ao anaty boaty fikarohana mba hahazoana ny mahasarika indrindra amin'ny valin'ny fikarohana. Ny fikarohana dia azo zaraina ho sokajy telo lehibe - navigational, informatique ary transactional. Ny fahasamihafan'ny fanontaniana dia ahafahantsika mahatakatra ny fitarainana mety amin'ny mpanjifa mitady fitadiavana sy ny fikasany. Andeha isika hijery akaiky ireo karazana fanontaniana momba ny milina fikarohana.
ho an'ny karazana fangatahana rehefa fantatry ny mpampiasa ny karazana loharano tadiaviny. Izy ihany no mametraka ao amin'ny boaty fikarohana iray ao amin'ny tranonkala iray manokana ary manome valiny mahasoa - buy twitter followers instant delivery. Ireo fanontanian'ny navigateivo dia manana fikasana mazava ary raha tsy ao an-tsain'ny mpampiasa ny tranonkalanao dia tsy ho hitanao ny tranonkalanao.
Mety sarotra ny manangana tetikady amin'ny karazana fangatahana. Na izany aza, raha mifantoka amin'ny fanatsarana ny mari-pamantaranao marika ianao dia mampiakatra avo roa heny. Ny salanisa amin'ny valin'ny fikarohana dia fito isa ny valiny hita eo amin'ny pejy voalohany voalohany amin'ny Google SERP. Google no nanao ity dingana ity satria toa tsy misy ilàna azy ny hampiseho valiny mihoatra ny fito raha ny mpampiasa amin'ny ankabeazan'ny tranga dia vokatry ny vokatra TOP. Na izany aza, ny fanontaniana sasany izay miseho dia tsy mety amin'ity karazana ity. Ohatra, ny mpampiasa rehetra izay mikaroka ny fangatahana "Instagram" dia tsy maintsy mahita ity fampiharana multimedia ity. Ny sasany amin'izy ireo dia te-hamaky lahatsoratra na fampahalalana vitsivitsy mifandraika amin'ny toe-javatra Instagram na fanavaozana sasany. Izany no mahatonga anao ho azonao antoka fa manana fangatahana fikarohana mahaliana ianao izay miseho amin'ny valin'ny karama sy organika.
Ny fangatahana fampahalalana dia rehefa maniry ny hahita valiny amin'ny fanontaniany ny mpampiasa iray na hamaha olana sasany. Tsy zava-dehibe ho azy ny karazana habaka atrehiny. Misy ihany ny fepetra takian'ny loharanon'ny tranonkala ho an'ny fangatahany. Ny fangatahana fampahalalana dia ny fampielezana lehibe indrindra ary ampiasain'ny mpiserasera amin'ny ankapobeny. Ny tanjona voalohan'ny fanatsarana ny môtô dia ny hanintonana ireo mpampiasa mitady votoaty tsara amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny fangataham-baovao. Raha manana firaiketam-po sy firaiketam-peo SEO ianao izay afaka manampy ny mpisera hamaha ny olany, dia azo inoana fa ny tranonkalanao dia hahazo serivisy traikefa goavana izay afaka mivadika ho fivarotana. Sarotra ny mahazo tombony amin'ny fangataham-baovao amin'ny maha-toerana ny SERP voalohany, amin'ity tranga ity, matetika dia mihatra amin'ny valin'ny Google Knowledge Graph valiny sy ny lahatsoratra Wikipedia. Na dia izany aza, maro ireo mpampiasa dia te-hahazo ny vaovao lalindalina kokoa momba ny lohahevitra. Ny fahafahanao hanangona ny sivan-tsainao sy ny fiovanao. Mba hampidirana ny fifamoivoizana amin'ny loharanon-tranonkalanao, azonao atao ny mampiasa lahatsoratra bilaogy miaraka amin'ny fampahalalam-baovao sy toro-hevitra. Ankoatra izany, mahira-tsaina ny manoratra amin'ny antsipiriany ny dingana manaraka ny toro-làlana sy ny lahatsary fanoritsoritana.
Fangatahana fanodinkodinana dia rehefa maniry hividy entana ny mpampiasa iray. Toa sahala amin'ny hoe "hividy zavatra" na "mandidy zavatra iray. "Ankoatra izany, ny fangataham-panontaniana dia mety ahitana mari-pamantarana marina toy ny" fitaovana Apple "na" smartphones Samsung ". "Maro ny fikarohana ao an-toerana toy ny" trano fisakafoanana azon'i Chicago any akaikin'i Chicago ". Ny fangatahana fifanakalozan-dresaka dia ny fangatahana tombony be indrindra izay ahafahan'ny mpivarotra an-tserasera manangona vola an-tserasera. Mba hahazoana ny ROI ambony indrindra, ny tompon'ny tranonkala dia manondro ny fanatsarana ny môtô sy ny dokam-barotra amin'ny antsipiriany.